कति पढेकी छन् साउथ इन्डियनकी चर्चित सुन्दरी नायिका अनुष्का सेट्टीले ? – ताजा समाचार
कति पढेकी छन् साउथ इन्डियनकी चर्चित सुन्दरी नायिका अनुष्का सेट्टीले ?
‘बाहुबली’की देवसेनाका रूपमा बढी चर्चित अनुष्का सेट्टीले कम्प्युटर एप्लिकेसनमा ग्राजुयसन पास गरेकी छिन् । ३५ वर्षीया अनुष्काले माउन्ट कर्मल कलेज, बैंग्लोरबाट ग्राजुयसन गरेकी हुन् ।
सन् २००५ मा बनेको ‘सुपर’ फिल्मबाट करिअर सुरु गरेकी उनले ‘बाहुबली’, ‘बाहुबली २’ का साथै थुप्रै दक्षिण भारतीय तथा हिन्दी फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् ।